Waa maxay qaboojiyaha, sidee loo sameeyaa iyo noocyada barafka | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 07/05/2021 12:45 | Ciencia
Barafku waa cuf badan oo baraf ah oo la soo ururiyey oo sameysmaya kumanaan sano. Dhicitaanka joogtada ah ee barafka iyo heerkulka hooseeya ee ka hooseeya 0 darajo si isdaba-joog ah ayaa sababa in barafka uu ku ururi karo isla meeshii uu u horseeday inay isku beddesho baraf. Glaciers waa walxaha ugu waaweyn meeraheenna inkasta oo ay u muuqdaan kuwo go'an, way socdaan. Waxay si tartiib tartiib ah ugu socon karaan sida webiyada oo kale oo ay dhex mari karaan buuraha iyaga oo abuuraya meerisyo iyo gargaar baraf leh Waxay kaloo abuuri karaan dhagax iyo harooyin.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ka ogaato barafka, asalkooda iyo astaamahooda.
1 Waa maxay barafka
3 Qaybaha barafka
4 Noocyada barafka ee jira
Waa maxay barafka
Glacier waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay haraagii ugu dambeeyay Da'da barafka. Waqtigaan, heerkulka hoose ayaa ku qasbay barafka inuu u dhaqaaqo dhinaca hoose ee cimilada halkaasoo cimiladu ay hadda ka diiran tahay. Waqtigan xaadirka ah, waxaan ka heli karnaa noocyada kala duwan ee baraf-buuraha buuraha dhammaan qaaradaha marka laga reebo Australia iyo qaar ka mid ah jasiiradaha badda. Inta udhaxeysa hareeraha 35 ° woqooyi iyo 35 ° glaciers south waxaa kaliya lagu arki karaa gudaha Buuraha Rocky, Andes, Himalayas, New Guinea, Mexico, Bariga Afrika iyo Buurta Zard Kuh (Iran).
Waxaa jira qadarka dusha sare ee barafku ku fadhiyo taas qiyaastii wuxuu ka kooban yahay 10% dhammaan dusha sare ee meeraha. Waxay badanaa ka muuqdaan aagaga buuraha dheer maxaa yeelay xaaladaha deegaanku waa ku habboon yihiin. Taasi waa, waxaa jira heer kul hoose iyo roob badan. Waxaan ognahay inay jiraan nooc ka mid ah roobab lagu yaqaan magaca roob da, taas oo dhacda marka hawadu sare u kacdo oo ku dhammaato isu soo urura iyo roob ku soo daata buuraha dusheeda. Haddii heerkulku ka hooseeyo 0 darajo oo isdaba-joog ah, roobabkani waxay noqonayaan qaab baraf waxayna ku dambayn doonaan dhigaalka illaa ay ka sameysmaan baraf.
Barafka ka soo baxa buurta dheer iyo gobollada kala duwan waxaa loo bixiyaa magacyo kala duwan. Kuwa ka muuqda buuraha dhaadheer waxaa loo yaqaan alpine glaciers halka glaciers at the polles waxaa loo yaqaannaa baraf-baraf. Inta lagu jiro xilliyada diirimaadka, qaarkood waxay soo daayaan biyo dhalaal dhalaal dartiis, iyagoo abuuraya meydad muhiim u ah biyaha xoolaha iyo dhirta. Intaas waxaa sii dheer, waa mid aad waxtar ugu leh aadanaha tan iyo markii biyahan loo adeegsado bixinta aadanaha. Waa keydka ugu weyn ee biyaha macaan ee ku yaal meeraha, oo ay ku jiraan ilaa saddex-meelood meel ka mid ah.
Aan aragno maxay yihiin tillaabooyinka ugu waaweyn ee u dhaca sameynta baraf-dhagax. Waxay ka kooban tahay joogtaynta barafka isla aagga sannadka oo dhan. Haddii aaggu leeyahay heerkul joogto ah oo hooseeya barafka waa la keydiyaa ilaa barafka la sameeyo. Jawiga dhexdiisa, dhammaan maadooyinka uumiga uumiga waxay ku dhagan yihiin jajabyo habaas yar yar waxayna sameysmayaan qaab-dhismeedyo crystal ah. Markaa ayaa ah molikuyuullada kale ee uumiga biyaha waxay u hoggaansamaan kristantarrada la sameeyay oo qaababka barafka ee aan u barannay inaan aragno ayaa la sameeyaa.
Snowflakes waxay ku dhacaan qaybta ugu sareysa ee buuraha waxaana lagu keydiyaa waqti kadib baraf joogto ah. Marka barafka ku filan la ururiyo, qaababka barafka ayaa bilaabmaya inay sameysmaan. Sannadba sanadka ka dambeeya culeyska lakabyada cusub ee barafka soo ururaya wuxuu isu keenaa qaabdhismeedka barafka wax badan oo ka badan wuxuuna keenaa in barafku mar labaad qaylo dhaansado maadaama hawada u dhexeysa kristantariyadu ay sii yaraanayaan. Mar kasta oo kristantariyadu sii weynaadaan oo barafka la buuxiyey wuxuu kordhiyaa cufnaantiisa. Dhibcaha qaarkood waxay u nuglaadaan cadaadiska barafka oo waxay bilaabaan inay hoos ugu soo dhacaan oo waxay sameystaan ​​nooc webi ah oo dhammaadkiisa mid kasta ka mid ah gargaarka U-qaabeeya.
Marinka glacier ee loo maro nidaamka deegaanka wuxuu abuuraa gargaar loo yaqaan gargaar baraf. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'glacier Modeling'. Barafku wuxuu bilaabmayaa inuu gaaro xariiqa isu-dheellitirka taas oo khadadka kor ku xusan aad ka helayso tiro ka badan intaad lumisay laakiin hoosta waxaad ka luminaysaa inta aad guuleysato Nidaamkani sida caadiga ah wuxuu qaataa in ka badan 100 sano si ay u dhacdo.
Glacier wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan.
Aagga Iskudarka Waa aagga ugu sarreeya ee barafka ka da'o oo ku ururo.
Aagga goynta. Aaggan waxaa ka socda howlaha isku darka iyo uumi-baxa. Waa halka barafku gaaro dheelitirka u dhexeeya kororka iyo luminta cufnaanta.
Dildilaaca. Waa meelaha uu barafku dhakhso ugu socdo.
Moraines. Kuwani waa xirmooyin mugdi ah oo lagu sameeyay jiirka oo ka sameysma geesaha iyo dushooda. Dhagaxyada uu soo jiidayo glacier-ka ayaa lagu keydiyaa oo lagu sameeyaa aagaggan.
Terminal Waa dhamaadka hoose ee glacier-ka halka barafku urursaday.
Noocyada barafka ee jira
The iyo glacier waxaa loo kala saari karaa siyaabo badan inkasta oo ay kuxirantahay qaabeynta iyo sameyskeeda. Aan aragno maxay yihiin noocyada kala duwan ee jira:
Glacier Alpine: Waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca glacier buuraha waana kuwa ka dhasha buuraha dhaadheer baraf urursiga.
Circus glacier: waa berked u samaysan qaab bilaha bisha oo ay biyuhu tartiib tartiib tartiib ugu urursadaan.
Harooyinka qabiilooyinka: waa keyd biyood ka soo bilaabma diiqadaha dooxada waxaana jira waqtiyo ay barafoobaan iyo kuwo kale oo aan ahayn.
Dooxada glacier: natiijadan ficilka nabaad-guurka ee carrabka gla gla. Badanaa waxay leedahay dooxada U-qaabeysan waxayna soo saartaa qaab dhismeed dhagax ah oo dheereeya.
Inlandis: waa baraf aad u tiro badan oo gebi ahaanba daboolaya dhulka oo dhan oo aakhirka u soo wareegaya dhanka badda ilaa badda.
Drumlins: Iyagu waa tuulmooyin ay ka samaysan yihiin walxo jilicsan oo barafku ku jiiday dhaqdhaqaaqiisa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto barafka iyo astaamaha uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Waa maxay baraf sideese loo sameeyaa